Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » OTDYKH Expo any Rosia fahombiazana manaitaitra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
OTDYKH Leisure Fair any Russia
Tapitra ny andiany faha-27 amin'ny OTDYKH Leisure Fair any Russia, ary fahombiazana lehibe izany. Nanomboka ny 7 ka hatramin'ny 9 septambra tao amin'ny Expocentre Fairgrounds any Moskoa. Tamin'ity taona ity dia orinasa 450 nahagaga no nandray anjara, avy amin'ny faritra Rosiana 41 sy firenena 23 samy hafa.
Ny fampirantiana OTDYKH Leisure Fair dia nahitana orinasa 450 avy amin'ny faritra 41 Rosiana sy firenena 23 samy hafa.
Mpitsidika ara-barotra maherin'ny 6,000 no nanatrika mivantana ny kianja filalaovana, ary olona maherin'ny 3,000 no nandray anjara tamin'ny Internet.
Ny fampirantiana dia nahitana hetsika fandraharahana 30 nisy mpandahateny 160 sy mpandray anjara efa ho 1,500 XNUMX.
Ireo firenena nandray anjara tamin'ny expo 2021 OTDYKH dia: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, China, Cuba, Sipra, Egypt, Germany, India, Iran, Italy, Japan, Jordan, Lithuania, Moldova, Peru, Spain, Sri Lanka, Thailand, Tonizia, ary Venezoelà.
Ity taona ity ny OTDYKH Leisure Fair nankalaza ireo vao tonga marobe tamin'ity hetsika ity, anisan'izany ny firenena Azerbaijan, ny faritr'i Ceará any Brezila, ny prefektioran'i Tottori any Japon ary ilay orinasa, Sri Lankan Airlines.
Anisan'ireo faritra Rosiana 41 izay nirehareha tamim-pireharehana tamin'io fampirantiana io, misy ihany koa ireo vao avy nandrasana fatratra. Ireo no faritra ao Yugra, Teras Krasnoyarsk, Tomsk, Chelyabinsk, ny faritr'i Rostov sy Omsk ary ny Repoblikan'i Udmurtia.
Ny fanatrehana io fampirantiana io dia nahatratra olona 10,000 6,000 teo ho eo na an-tongotra ary saika. Mpitsidika ara-barotra mihoatra ny 3,000 no tonga nanatrika io fampirantiana io raha olona XNUMX mahery no nanaraka ny fampirantiana tamin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera. Amin'ny alàlan'ny fanamorana ireo solony an-tserasera ireo dia afaka nanitatra ilay fampirantiana tamin'ireo mpandray anjara virtoaly erak'izao tontolo izao ilay fampirantiana.
Indray mandeha indray, ny OTDYKH Leisure Fair dia nanasongadina karazana mpiara-miasa mahavariana, na eto an-toerana izany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nirehareha ny fampirantiana nirehareha an'i Ejipta ho firenena mpiara-miasa aminy amin'ity taona ity miaraka amin'ny laharana mahatalanjona sy delegasiona lehibe. Ny faritra mpiara-miasa dia Nizhny Novgorod ary ny tanàna mpiara-miasa dia St. Petersburg. Ny mpiara-miasa ofisialy amin'ity hetsika ity dia ny faritra Altai sy ny Repoblikan'i Khakassia. Ny mpiara-miasa ofisialin'ny mpizahatany dia ny Academservice. Ary farany, ny mpiara-miombon'antoka ankapobeny dia Sberbank, ny banky lehibe indrindra any Russia ary iray amin'ireo andrim-panjakana mitarika ara-bola manerantany.
Na eo aza ny famerana ny fivezivezena amin'izao fotoana izao sy ny sisin-tany mihidy, dia nandray anjara tamin'ny sehatra rehetra ny exhibitors iraisam-pirenena. Tamin'ny fiverenana mahatalanjona tamin'ity foara ity dia tsy firenena mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiratiana i Egypt fa nandefa delegasiona lehibe ho an'ny fampirantiana kosa, notarihin'ny minisitry ny fizahantany sy fahagolan'i Egypt, Andriamatoa Khaled al-Anany. Ny haavon'ny fahalianan'ny matihanina amin'ny hetsika amin'ity taona ity dia ny fiverenan'ny sidina mivantana eo anelanelan'ny Hurghada sy Sharm el-Sheikh ary tanàna 41 any Russia.
Nisy fanamarihana manokana natao ho an'ny Birao Fampiroboroboana ny fizahan-tany ao Sri Lanka izay nanolotra fijoroana manokana sy lehibe miaraka amin'ireo orinasa mpiara-miombon'antoka telo ambin'ny folo. Sri Lanka dia nanasongadina delegasiona lehibe iray izay notarihin'ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina, Hon. Ranatunga Prasanna. Ho fanampin'izany, Sri Lankan Airlines no nandray anjara voalohany tamin'ny tantaran'ny foara, niaraka tamin'ny fijoroany manokana.
Solontena tsara i Amerika Latina tamin'ny tsenan'ny OTRA 2021 OTDYKH Leisure; Kiobà dia nanamarika ny fifindrana miverina amin'ny endrika talohan'ny pandemika amin'ny fampiratiana miaraka amin'ny fijoroana 100m² tena azy. Nandritra ny lanonam-panokafana dia nanambara ny minisitry ny fizahan-tany voalohany Kiobàna, Maria del Carmen Orellana Alvarado fa miasa mafy i Cuba mba ho toerana azo antoka COVID ho an'ny mpandeha ary miomana tsikelikely hanokatra ny sisin-taniny izy. Vokatr'izany, manomboka ny 15 Novambra 2021, dia hanafoana ireo fitsapana tsy maintsy atao COVID PCR ho an'ny mpizahatany i Kiobà, fa kosa hanao fitiliana an-tsokosoko rehefa tonga.
Na dia maro aza ny firenena eoropeana andrefana mbola manana sisintany mihidy sy ny fameperana ny dia, dia nisy fivoarana ara-pahasalamana avy tany Eropa. Bulgaria, Espana ary Sipra dia samy nanana ny toerany avokoa, fa ny fampirantiana hafa kosa dia i Italia, Alemana ary Litoania.
Azerbaijan vaovao tonga olom-baovao dia nisy fiatraikany tamin'ny fijoroana manaitra sy orinasa 18 mpandray anjara. Nanao hetsika isan-karazany ihany koa izy ireo ary nandray anjara tamin'ny fivoriana B2B efa niomanana niaraka tamin'ireo mpandraharaha mpizahatany rosiana sy mpampahalala vaovao. Izany dia nahatonga ny fametrahana fifanakalozan-kevitra an-kalamanjana teo amin'i Russia sy Azerbaijan.
Betsaka ny zava-nisongadina tamin'ny fampisehoana fialantsasatra OTDKYH 2021, ao anatin'izany ny fifanarahana ofisialy maro izay natao sonia. Ny tanàna mpiara-miasa St. Petersburg dia nanao sonia fifanarahana telo, ny iray tamin'ireo dia ny fifanarahana teo amin'i St. Petersburg sy i Moldova hiara-hiasa sy hiasa amin'ny sehatry ny fizahantany.
Fotoana iray hafa manan-danja amin'ny fampirantiana dia ny fanaovan-tsonia fifanarahana iraisam-pirenena hamorona ny lalambe rosiana federaly, ny M-12. Faritra Rosiana dimy nahagaga no nanao sonia ny fifanarahana: Moskoa, Repoblikan'i Tatarstan, faritra Vladimir, faritra Nizhny Novgorod, ary ny Repoblika Chuvash.
Farany fa tsy misy farafaharatsiny akory, ny Programme Business malaza be dia be ihany koa dia fahombiazana lehibe, nirehareha tamin'ny hetsika 30 natrehin'ny mpandahateny 160 sy solontena 1,500 XNUMX nahagaga. Ny zava-nisongadina tamin'ny programa fandraharahana dia ny fivoriana momba ny paikady mitondra ny lohateny hoe: The Future of Tourism, Travel Trends. Ity hetsika ity dia noporofoina fa adihevitra mafana teo amin'ny Minisitry ny fizahan-tany vahiny marobe ary koa ny solontena avy amin'ny Rostourism sy UNWTO.
Ho famaranana, ny fanontana farany ny OTDYKH Leisure Fair indray dia fahombiazana nahagaga niaraka tamin'ireo orinasa 450 nandray anjara tamin'ny faritra Rosiana 41 sy firenena 23 samy hafa. Saika nahatratra 10,000 ny mpanatrika ny foara, na mivantana na an-tserasera.
Ny komity OTDYKH Expo dia manolotra fisaorana ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fampirantiana, ary manantena ny hetsika amin'ny taona ho avy izy ireo, satria manohy mamaky toerana vaovao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.